FileCatalyst နှင့် Video Signal တို့သည်အီတလီဈေးကွက်သို့ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » FileCatalyst နှင့် video signal အီတလီ Market ကမှ File Transfer Acceleration ယူခဲ့
FileCatalyst နှင့် video signal အီတလီ Market ကမှ File Transfer Acceleration ယူခဲ့
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်Emmy®ဆုရရှေ့ဆောင်တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဦးဆောင်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုသူတို့အီတလီနိုင်ငံများအတွက်တန်ဖိုး-added ပြန်လည်ရောင်းချသူများအဖြစ် video signal နှင့်အတူသစ်တစ်ခုမိတ်ဖက်တီထွင်ခဲ့ကြကြောင်းယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။
Alessandro Trezzi အားဖြင့် 1994 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဗီဒီယိုအချက်ပြအီတလီနိုင်ငံဖြတ်ပြီးရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်းကိုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ဖြစ်နိုင်ကုမ္ပဏီ၏ဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးဦးဆောင်အနေအထားသိမ်းပိုက်ဖို့ခွင့်ပြု, အီတလီတစ်လွှားသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ဖို့စေပြီ။
video signal ရဲ့အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ personalization ဖြစ်၏ video signal နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူချင်းစီဖောက်သည်သူတို့ရဲ့သီးခြားဦးစားပေး လိုက်. နှင့်ကွပ်မျက်ခံရသောအစီအစဉ်ကိုလက်ခံ၏။ လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ဖို့ကနဦးစိတ်ကူးအဆင့်ကနေ, သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအပေါ်လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းအားကိုးနိုင်ပါတယ်။ video signal ကုမ္ပဏီတွေအတော်များများအဘို့အဒစ်ဂျစ်တယ် Workflows ၎င်းတို့၏စက်ချုပ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုစနစ်များနှင့်အတူအဖြစ် Analog စမှမိမိတို့မြောက်မြားစွာအောင်မြင်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
video signal ယခုရောင်းချနှင့်ထောက်ခံမှုပါလိမ့်မယ် FileCatalyst'' s ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်, တိုက်ရိုက်အဖြစ် FileCatalyst လုပ်ငန်းအသွားအလာ & FileCatalyst ဗဟို။
FileCatalyst တိုက်ရိုက် 10Gbps မှတက်၏အမြန်နှုန်းမှာ Point-to-point file ကိုလွှဲပြောင်း accelerates ကြောင်းဆာဗာနှင့် client ကို applications များတဲ့ suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst ထိုကဲ့သို့သောအောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကွန်ယက်ကိုချို့ယွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှေးကွေးဖိုင်လွှဲပြောင်း၏ကိစ္စများအောင်မြင်သောတဲ့မူပိုင်ခွင့် UDP ကို-based ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းပညာအသုံးချ။
FileCatalyst လုပ်ငန်းအသွားအလာအားလုံးသင်၏ဖိုင်လွှဲပြောင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ဝဘ်ပေါ်တယ်သည်။ ဒါဟာဖိုင်လဲလှယ်ရိုးရှင်းစွာနှင့် web ပေါ်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဖိုင်ခွဲဝေမှု Workflows streamlining အားဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ FileCatalyst တင်သွင်းခဲ့တဲ့, ဖြန့်ဖြူး, နှင့်အွန်လိုင်းဖိုလ်ဒါ: အသွားအလာသုံးအစွမ်းထက် web-based စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်း Workflows ပေါင်းစပ်။
FileCatalyst ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြုတဲ့ web application ဖြစ်ပါတယ် FileCatalyst ဖြန့်ကျက်။ ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလွှဲပြောင်းရှုမြင်ငွေပေးငွေယူသမိုင်းနဲ့သို့တူး, စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်နှိုးစက်စောင့်ကြည့်, node များစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် node ကို-to-server ကိုလွှဲပြောင်းစတင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကိုထည့်သွင်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် FileCatalyst ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုမှသူတို့ကအရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းအာကာသအတွင်းစစ်မှန်သောခေါင်းဆောင်ဖြစ်သကဲ့သို့, "Alessandro Trezzi, ဗီဒီယိုအချက်ပြ၏တည်ထောင်သူကပြောပါတယ်။ "ငါတို့တွေ့တယ် FileCatalyst အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အရွယ်အစားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့ Workflows မှအရေးပါသောများအပြင်, အဖြစ်လိုအပ်ချက်တကမ္ဘာလုံးသူတို့ကိုဝေမျှထားခြင်းအဖြစ်, အရွယ်အစားကြီးထွားဖို့ဆက်လက်။ "
"ကျနော်တို့ကဒီသစ်ကိုလက်တွဲအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးတန်ဖိုးထားရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်အဖြစ် video signal ကိုထောက်ပံ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သူတို့ကမီဒီယာ & ထုတ်လွှင့်အာကာသထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တက်ကြွစွာပါမြှင့်တင်ရန်ကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်ရောင်းထောက်ခံမှု FileCatalyst အီတလီမှာ "အလန် Atkinson များအတွက်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု & Marketing ကို၏ဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ် FileCatalyst.
စိတ်ဝင်စားဥရောပကုမ္ပဏီများအဘို့, FileCatalyst စက်တင်ဘာလ 2017 ထံမှ 15 မှအမ်စတာဒမ်အတွက် RAI ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အ IBC 19 မှာဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝ suite ကိုပြပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကတဲမှာသူတို့ရဲ့အစုစုကိုပြပါလိမ့်မယ် #7.B21 ။ အားလုံးတက်ရောက်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကြိုဆိုကြသည် FileCatalyst ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ suite ကို။
အကြောင်းအရာ FileCatalyst အော့တဝါ, ကနေဒါ, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်၏ခေါင်းဆောင်အနိုင်ရကာEmmy®ဆုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးမှာတည်ရှိပါတယ်။ 2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုတထောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖောက်သည်များ, စွမ်းအင် & သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဂိမ်းနှင့်ပုံနှိပ်, ရှိပါတယ်။ FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကို, ဒါမှမဟုတ် CIFS တူသောရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www ကိုသွား။filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter @ ပေါ်တွင်FileCatalyst.
video signal အကြောင်း အောင်မြင်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး 20 နှစ်ကြာပြီးနောက်, ဗီဒီယိုအချက်ပြ - Alessandro Trezzi အားဖြင့် 1994 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး - ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကဏ္ဍ Post-ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ၏ဖြန့်ဖြူးအတွက်၎င်း၏ဦးဆောင်အနေအထားအတည်ပြု။ အရည်အချင်းကိုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်သူတို့ကိုတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့စျေးကွက်ဝေစုသိမ်းပိုက်ဖို့ကုမ္ပဏီဆောင်ခဲ့အီတလီနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ video signal ရဲ့အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းရှိ၏ တစ်ခုချင်းစီကိုဖောက်သည်သူတို့ရဲ့တိကျတဲ့စီမံကိန်းတွေ fit မှမဆိုစိတ်ကြိုက်စီစဉ်လို့ရပါတယ်။ အယူအဆအဆင့်အနေဖြင့်သိရှိနားလည်လာအဆင့်မှီ, ဖောက်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့သည်။ အထူးပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမိမိတို့၏န်ထမ်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အသီးအသီးကဏ္ဍသို့ခွဲခြား, ဗီဒီယိုအချက်ပြ Analog စကနေဒစ်ဂျစ်တယ် Workflows မှကြီးမားသောအသံနှင့်ဗီဒီယိုစနစ်များ၏သဘောပေါက်အပါအဝင်ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုအဖြစ်မျိုးစုံအသွင်ကူးပြောင်းမှုအောင်မြင်ပါပြီ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IBC 2017 တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: အဆိုပါ Bulkans တက် Bulking ။ tera အာဒြိ Technologies ကမိတ်ဖက်ဂတိတော်ကိုဆောင်တတ်၏
နောက်တစ်ခု: စက်မှုလုံခြုံရေးကိုယ်စားလှယ်-Entry Level